Dị ka anyị nile mara na e nwere ọtụtụ faịlụ na audio nakwa dị ka video faịlụ na ha nwere ha nnọọ onwe atụmatụ dị ka ọdịyo na video àgwà, ọkpụkpọ chọrọ na ọtụtụ ndị ọzọ. Ukwuu n'ime ndị adịghị eche n'ụlọ na a kpọmkwem faịlụ maka ya ọdịyo na video àgwà ma ọ bụ mgbe ụfọdụ usoro na ha nwere adịghị akwado ahụ faịlụ Ọkpụkpọ. Dị otú ahụ a dịruru ná njọ, e nwere oké mkpa nke converting a faịlụ Ọkpụkpọ si onye ọzọ, ma iji melite graphic àgwà ma ọ bụ na-eme ka a na-usoro / ọkpụkpọ akwado usoro.
Ma AVCHD na MP4 na-ọma mara faịlụ formats ma AVCHD na-akwado site ole na ole n'ime Player na usoro mgbe ke iche, MP4 bụ dakọtara usoro maka nnọọ ukwuu ọnụ ọgụgụ nke egwuregwu na usoro. AVCHD bụ ndabere video Ọdịdị na camcorders ma unluckily ọ bụghị a dakọtara usoro maka iPhone, iPod, Android, iMovie na QuickTime wdg N'ihi ya, ọ bụrụ na ị chọrọ igwu gị dekọrọ na-echeta na ihe ọ bụla nke tupu kwuru ngwaọrụ ma ọ bụ usoro ahụ na ọ bụ ike na-atụ aro na ị kwesịrị tọghata AVCHD ka MP4. N'ezie, ọ bụ nnọọ ihe mfe ọrụ na ị pụrụ ime ka ihe ịga nke ọma na ntughari nke AVCHD ka MP4 na efu àgwà ọnwụ site n'enyemaka nke faịlụ converters na nke a mpempe ide na-iji na-ewebata ị na ụfọdụ pụrụ ịdabere na ngwọta maka nke a ụdị conversions.
Part 1: Best AVCHD ka MP4 Video Ntụgharị
Part 2: Free AVCHD ka MP4 Ntụgharị
Nkebi nke 3: Online AVCHD ka MP4 Ntụgharị
Nkebi nke 4: Na ihe ọmụma n'ihi na AVCHD na MP4
Ị na ike gwụrụ nke na-agbalị iche iche video atọghata iji tọghata gị AVCHD faịlụ ka MP4 na oge ọ bụla ihe ị na-site na njedebe nke ụbọchị bụ nnọọ a agbagọ ọdịyo ma ọ bụ video? Bụrụ na ị nwere affirming zaghachi ajụjụ a mgbe ahụ ị ga-enwe mmasị maa mgbalị anyị n'ihi na ewebata ị na n'okpuru aha Ntụgharị na kweere na-kasị mma AVCHD ka MP4 Ntụgharị.
Wondershare Video Converter Ultimate Na-na-na-ewu ewu ụbọchị n'ihi na ya magburu onwe atụmatụ na amamiihe results mgbe ala nke na-eji ya bụ ihe kwukwara perk, n'ihi na n'aka. Ụfọdụ n'ime ndị na-depụtara n'okpuru.
Ọ atọghata video na fọrọ nke nta 150 faịlụ formats.
Ọ bụghị nanị na-atọghata ma enyere na video edezi, ọnwụ, compressing na ime.
Ọ bụ ugboro 30 ihe ngwa ngwa na video akakabarede, tụnyere ndị ọzọ video converters.
4K UHD nkwado.
Ọ na-enyere gụgharia vidiyo na TV, na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Zuru okè wuru na-DLNA nkwado.
Ị nwere ike bulite ma ọ bụ download videos kpọmkwem site Wondershare Video Converter Ultimate.
1.2 Olee otú Jiri Wondershare Video Converter Ultimate maka AVCHD ka MP4 Nchigharị?
Ọ esesịn e tụlere n'elu na Wondershare Video Converter Ultimate bụ nnọọ a zuru okè ngwọta maka gị dum nsogbu banyere video akakabarede. Ma mgbe ị na-ekpebi na converting gị AVCHD faịlụ ka MP4 na nke a Ntụgharị, ị ga-eso ndị na-esonụ mfe nzọụkwụ ihe ịga nke ọma akakabarede na efu àgwà ọnwụ.
Nzọụkwụ 1 Download na wụnye usoro
Nke mbụ niile, i nwere ibudata Wondershare Video Converter Ultimate on ọ bụla usoro i nwere ma wụnye ihe omume ahụ site na isoro ọma kọwakwuru na mfe echichi ndu, ole na ole clicks. Ị nwere ike ibudata ya site na ịpị a njikọ: http://www.wondershare.com/pro/video-converter-ultimate.html
Nzọụkwụ 2 Họrọ File
Ozugbo i ọma arụnyere usoro ihe omume, nzọụkwụ ọzọ bụ na-emeghe omume na mbubata AVCHD faịlụ ka ya. Ebe ị nwere a nhọrọ nanị ịdọrọ faịlụ ka usoro ihe omume window ma ọ bụ pịa na tinye faịlụ na akara ngosi na ala ngalaba nke interface ma họrọ faịlụ site na nchekwa, ebe ọ na-azọpụta.
Nzọụkwụ 3 Họrọ Format
Mgbe importing faịlụ ka Ntụgharị, nzọụkwụ ọzọ bụ na-ahọrọ usoro iji nke faịlụ kwesịrị ka a converted. Ya mere, ebe a ị ga-ahọrọ MP4 dị ka a format ka nke faịlụ a ga-converted.
Nzọụkwụ 4 N'ọgba faịlụ
Ị na-fọrọ nke nta mere na ọrụ gị. Ugbu a na-ahapụ ndị fọdụrụ ka Ntụgharị ma tupu na ị ga-pịa na "tọghata" akara nke mere na Ntụgharị nwere ike ịmalite ya ọrụ.
Nzọụkwụ 5 Save / nyefee gị faịlụ
Ozugbo faịlụ na converted, ị nwere ike ịzọpụta ya ka dị ngwaọrụ ma ọ bụ ị nwekwara ike nyefee ya na onye ọzọ, na-enweghị eriri USB, site a Wi-Fi njikọ.
1.3 Video Tutorial: Olee otú iji tọghata AVCHD ka MP4 maka Windows (Windows 10 gụnyere)
Ọ bụrụ na ị chọrọ iji dozie nsogbu ahụ iji tọghata otu AVCHD faịlụ ka ihe MP4 faịlụ maka free, anyị nwere ike ikwu na ị na-enweta Wondershare Video Converter Free.
Wondershare Video Converter Free Na-kweere na-a kasị zie kasị mma Ntụgharị maka AVCHD ka MP4 na ọtụtụ ndị ọzọ dị ka mma. Ajụjụ bụ, "Gịnị mere ka ọ dị otú ahụ a ma ama na a pụrụ ịtụkwasị obi video Ntụgharị ngwọta?" Ị ga-ahụ azịza ajụjụ a na n'okpuru depụtara atụmatụ a Ntụgharị na ọ dị iche na.
Unlimited video akakabarede
Enwusi ngwa ngwa video akakabarede
Ịtụnanya video edezi
Secure na a pụrụ ịdabere na amamiihe results na-enweghị data ma ọ bụ àgwà ọnwụ
Single click nbudata site YouTube.
2.2 Olee otú Jiri Wondershare Video Converter Free maka AVCHD ka MP4 Nchigharị?
Ọ bụ incredibly mfe iji Wondershare Video Converter Free. Ebe a bụ nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu na ga-nyere gị iji tọghata gị AVCHD faịlụ ka MP4 usoro.
N'ụzọ doro anya, ị nwere ike ghara tọghata faịlụ na-enweghị isi ngwá ọrụ na ebe a na isi ngwá ọrụ bụ onye ọzọ karịa Wondershare Video Converter Free, na mgbakwunye na a usoro iji rụọ ọrụ ya. Ya mere, Ọ bụrụ na-adịghị nke a Ntụgharị mgbe ahụ ị na-atụ aro ibudata ya mbụ, wụnye ya na ngwaọrụ gị na ahụ na-aga n'ihu na faịlụ akakabarede usoro.
Ị nwere ike ibudata omume site na ịpị a njikọ: http://www.wondershare.com/pro/free-video-converter.html
Nzọụkwụ 2 Họrọ na mbubata File
Nzọụkwụ na-esonụ usoro a bụ mbubata faịlụ Wondershare Video Converter Free. Ị pụrụ nanị ịdọrọ họọrọ faịlụ ka ya interface ma ọ bụ pịa "Tinye Files" akara ngosi.
Nzọụkwụ 3 Họrọ File Format
Ugbu a si n'akụkụ aka nri nke interface, họrọ ọ faịlụ Ọkpụkpọ. Dị ka ị na-achọ MP4 akakabarede otú ahụ, pịa na MP4 si ọkọnọ ndepụta nke formats na-egosi na ihuenyo.
Nzọụkwụ 4 tọghata File
4th nzọụkwụ nke faịlụ a akakabarede usoro bụ pịa na "tọghata" button na i nwere ike ịhụ na ala nri akuku nke interface. Ozugbo ị pịa na na, Wondershare Video Converter Free ga-amalite converting gị faịlụ.
Nzọụkwụ 5 Save na-enwe gị Video
Nke a superfast Ntụgharị ga tọghata gị video n'ime-adịghị. Ugbu a, i nwere ike igwu, chekwaa ma ọ bụ ịkọrọ gị video na MP4 usoro.
Short Description Ọ bụ otu faịlụ dabeere usoro maka playback nke elu-definition videos na dijitalụ ndekọ. Ọ bụ a dijitalụ multimedia format maka na ịchekwa video na ọdịyo. M nwekwara ike na-echekwa ndị ọzọ data dị ka sill oyiyi na ndepụta okwu wdg
Mmepụta Sony na Panasonic
ISO (International Òtù maka Standardization)
VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ
Ọ na-akwado nta ọ bụla mgbasa ozi ọkpụkpọ
Akpa Hapụ Ke 2006 Na 2001
Links maka inwekwu Ọmụmụ
AVCHD MTS Video - The Kacha ọhụrụ Sony & Panasonic HD camcorder Format
Ihe Ọmụma Banyere Avchd
Ọzọ Ama banyere AVCHD Codec
Gịnị Bụ MP4 Format?
Ihe Ọmụma Banyere MP4
Ọzọ Ama banyere MP4
Olee otú iji tọghata otu MP4 na OGV File?
> Resource> MP4> Olee otú iji tọghata AVCHD ka MP4 na Zero Ogo Loss